Ny Fifalian'ny enina: baolina kitra sy ny ivelan'ny baoty | 1xbet
Rehefa nitombo ny fifalian’ny enina dia nankamamy VHS iray lehibe noho ny hafa izy rehetra: ny zazalahy avy any Brezila. Ity horonantsary ity, izay nanasongadinana ny fiadiana ny amboara eran-tany Brezila tamin’ny taona 1930-86, no antontan-taratasy tonga lafatra tamin’ny fotoana naha-mantra ny jogo bonito fa tsy teny filamatra. Ary na dia niasa momba ny fahaizana ambin’ny folo ambin’ny folo aza tamin’io kasety io izahay, dia tsy nisy na inona na inona nahazo ny famirapiratan’ny visceral ary ny nofinofy fotsiny amin’ny baolina kitra Breziliana toa ny mpiantsoantso amin’ny faran’ny tongotra.
Joy of Six, ka ndao hiroso haingana any Éder, ilay mpilalao havia havia ao amin’io ekipa be voninahitra 1982 io. Amin’ny cricket, ireo izay manetsiketsika ny baolina dia lazaina fa mampiresaka ny baolina. Rehefa nokapohan’i Éder tamin’ny voditongony ny tongony dia nasainy niresaka toa an’i Brian Bless.Tany Wembley tamin’ny 1981 dia nandefa an’i Ray Clemence tamin’ny fomba diso avy any ivelan’ny faritra izy, raha ny daka nataony tamin’i Argentina tany am-piadiana ny amboara eran-tany tamin’ny 1982 dia nahagaga tokoa ka nifandray tamin’ny tanjona mihoatra ny tena scorer, Zico.
Ity daka maimaimpoana ity dia nanambara tamin’ny eran’izao tontolo izao, fa tsy ireo izay mahalala ny baolina kitra Breziliana. Éder dia nanao an’io nandritra ny taona maro. Tamin’ny 1978, dia nahazo «howitzer» somary ludicrous ho an’i Grêmio nanohitra an’i Internacional. Lava loatra ny fihazakazahany, voatery nipaoka ny ankavanan’ny kamerà mba hitifirana azy fotsiny. Rehefa nanao izany izy, ny mpandika tenin’i Celestino Valenzeula, fantany ny fahaizan’i Éder avy 40 metatra, dia nanambara fanambarana maika momba ny asam-panjakana: “Atención.”
Taorian’io fihazakazahana tsy nisy farany io dia nipoaka tamin’ny tifitra tamin’ny tongony roa tamin’ny tany izy, ary ny hafainganam-pandeha sy ny fihodinanana dia nanome ny mpiandry tsatokazo Luis Carlos Gasperin vintana 0,00%. Tanjona ankalazaina be dia be hatramin’ny taloha no toa maotina ka hatramin’ny maoderina. Saingy ity – ary ny ankamaroan’ny zavatra ao amin’ny Boys from Brazil VHS – dia toa mahafinaritra amin’ny vanim-potoana rehetra. Facebook Twitter Pinterest
mpilalao – Dennis Bergkamp sy Ricardo Quaresma dia hafa – izay manana fifehezana lehibe kokoa sy ny elanelana ivelan’ny tongotra noho ny ataon’ny ankamaroan’ny ao anatiny. Izany dia mamela azy ireo hikorontana amin’ny fomba roa sy hahita ny zoro izay mihoatra ny mpilalao hafa, zavatra manandanja indrindra rehefa manokatra fiarovan-tena. The Joy of Six: Diego Maradona Hamaky bebe kokoa
tao Manchester United saingy nanana ny fotoanany izy, ary ny ankamaroany dia orgasmika tamin’ny alàlan’ny baolina. Tsy mitovy amin’i Paul Pogba, avy eo. Ny tsara indrindra nataon’i Verón dia ny làlana nandrava nametraka ny tanjona faharoa nataon’i Ole Gunnar Solskjær nanoloana an’i Deportivo tamin’ny 2002.Malaza ho an’i David Beckham ny lalao ary nanampy ny teny hoe metatarsal amin’ny lexicon football. Saingy ny fampiasan’i Verón ny metatarsal fahadimy no mendrika hotadidina. Arakaraka ny ahitanao azy no mahamaro ny mystifying azy. Raha nanomboka nanitsy teo aloha izy io, dia ho nosakanan’i Héctor; amin’ny manaraka ary mety ho nanosika an’i Solskjaer malalaka loatra izany. Ny ekipa mibaiko ny mpanara-maso ny fifamoivoizana amin’ny rivotra, manana ny fahaizan’ny manafaka fotoana, dia tsy afaka namolavola làlana tsara kokoa mankany amin’ny tanjona. Verona dia nanana segondra roa hanamboarana izany rehetra izany, raha andiana endrika maromaro kosa no nihetsika tamin’ny fahitany peripheral – ary tsy maintsy nampiharina ihany koa.Raha tsy hitanao ny fahalehibiazany amin’izany, dia olona adala avokoa ny anao rehetra. . Eto no tonga eo amin’ny Hackney Marshes ny World XI; izay ny teknika faran’izay ambony takiana mba hamelezana ny baolina ivelan’ny tongotra dia ampiarahina amin’ilay mpiantsoantso voalohany hitanay isaky ny ambaratonga.
tifitra izay nibolisatra tao anaty paositra no iray amin’ireo fotoana nanitarana ny fifaninanana. Nahazo tanjona goavambe izy tamin’ny alàlan’ny ivelan’ny tongony manoloana an’i Uruguay teo am-piandohan’ny fifaninanana, nefa izany dia trosa. Ny ezaka fanoherana an’i Angletera dia nokapohin’ny hery mahery vaika.Ny teknika dia maloto koa, ny tanany havia nanondro miankavia ary ny vatany nianjera somary niankavia toy ny mpilalao Subbuteo tapaka raha nanapoaka ny tongony havanana ny baolina.
Ny Barclays League Division 1 dia sahy nampiasa ny ivelan’ny tongotra mba hamindra ny baolina roa metatra, tsy manadino azy akory ny handoro izany avy eo amin’ny 30. Nandresy ny lalao i Angletera – mety tadidinao ny tanjon’i David Platt – saingy i Scifo no naka sary an-tsaina azy.
ny daka maimaimpoana an’i Teófilo Cubillas, manam-pahaizana peroviana.Nanatona ny mpitantana azy, Ally MacLeod i Rough, hanontany raha misy zavatra manokana tokony ho fantany. “Och, adinoy izy zazalahy,” hoy i MacLeod. “Tsy manan-tsahala izy.”
Na dia ny fenitr’i Cubillas aza dia niavaka – fa tsy hoe satria teo amin’ny sehatra lehibe indrindra io. Doka maimaimpoana an’arivony no voamarina miaraka amin’ny ivelan’ny tongotra, ary an’arivony maro no napetraka tamim-pitandremana tao anaty harato hatramin’ny 20 metatra tamin’ny fomba McAllister / Mata. Saingy sahirana izahay mahatadidy ireo maro izay nanambatra azy roa, toa ny nataon’i Cubillas tamin’io tsipika mahasalama sy tsy misy dikany io ho any amin’ny zoro ambony.
Na izany aza dia mbola tsara kokoa i Cubillas’s, tsy kely indrindra satria ny daka maimaimpoana dia fomba iray sisa tavela afovoan’ny foibe, ny lafiny ratsy ho an’ny tongotra ivelan’ny-mahitsy.Izy io dia fahaiza-manao miavaka miavaka, iray izay tokony ho nomena anarana araka azy – raha mba nisy olona ampy hamerimberina izany.
ny zavatra iraisan’ny rehetra: fampiharana mazava ny handrina, ary fanatsarana hafetsena ivelany ny tongotra.Ny tanjon’i Harford ho an’i Luton hiady amin’i Wimbledon tamin’ny ampahefa-dalana tamin’ny fiadiana ny amboara FA 1988, rehefa nivadika ho Fred Fredaire izy mba hiatrehana ny fihenjanana tampoka dia ho nahazo famerenana tsara raha vokatra avy amin’ny La Masia no nahazoana azy fa tsy 6ft 3ins ny torimaso fanafihan’ny. (Tao amin’io lalao io ihany, i Dennis Wise no lasa lehilahy voalohany nahatafiditra baolina tamin’ny tongotra roa tamin’ny baolina, saingy nanitsakitsaka izahay.) The Joy of Six: Barcelona v Manchester United Vakio bebe kokoa Ny zidane tafahoatra an’i Zidane dia nanohitra an’i Bayern Munich. Manantena ianao ny antsasaky ny hiaraka amin’ny vokam-peo vitsivitsy: clonk eto, parp iray any. Saingy tsy sombin’ny Soccer AM volamena ity; Zidane dia nikasa ny hitondra fikitihana ilay Crucible Theatre ho an’ny Olympiastadion.Fitaovana mahasoa amin’ny famitahana foana ny ivelan’ny tongotra, ary tamin’ny fotoana nahatsapan’ireo mpiaro efatra Bayern akaiky azy izay nanjo an’i Zidane, efa ho any Roberto Carlos ny baolina.
Nilaza i Sir Alex Ferguson indray mandeha Zidane fa “manao ny tetika mahafinaritra rehetra nefa tsy mandratra anao”. Somary nibanjina ihany izy rehefa, andro vitsivitsy taty aoriana, ny fahafatesan’i Zidane tsy nandalo dia nanampy an’i United hivoaka an’i Eoropa, saingy marina ny an’i Ferguson. Ny famokarana Zidane amin’ny tanjona kendrena sy ny fanampiana dia tsy dia tsara velively, ary tsy mpilalao Fantasy Football loatra izy. Saingy, raha mampatsiahy antsika ny fotoana toa an’io, dia iray amin’ireo mpilalao baolina fanta-daza lehibe izy. Ny ankamaroan’ny tsy sahy mampiasa azy io, noho ny tahotra sao diso hevitra ny fifandraisana ary mitarika ny baolina amin’ny kaody postcode hafa.Mbola lehibe kokoa aza izany risika izany raha antenaina isa izy ireo, ka izany no tsy dia fahita firy ny famitana ny iray amin’ny iray amin’ny ivelan’ny tongotra. Izy ireo dia mitaky toetra telo mahaliana indrindra amin’ny baolina kitra: fahatokisana, hozatra ary kilasy. Facebook Twitter Pinterest Teddy Sheringham dia nankalaza taorian’ny nahazoany isa tamin’ny Newcastle United. Sary: Andy Hooper / Daily Mail / Shutterstock </p </<// <
ny filalaovany. Tsy afaka nihazakazaka haingana tahaka ny olon-kafa izy, ka nanao ny zava-drehetra tamin’ny fotoany avy. Arakaraka ny nahavitan’ny lalao azy no nahalasa milamina azy kokoa.Nilalao baolina kitra elitre niaraka tamin’ny taham-pijanonan’ny fony izy: The Fiver: Midira ho an’ny mailaka fandefasana baolina kitra maimaimpoana.
“Tokony ho nandre an’i Scholesy nidradradradra momba azy ianao,” hoy i Gary Neville. ” Scholes dia te-hamono tanjona toy izao – iray, toy ny ankamaroan’ny zavatra tsara vita amin’ny ivelan’ny tongotra, dia naneho ny fahatokisan’ny mpilalao baolina kitra ambony.